म पंजीकरण गर्न पछि मेरो खाता लगइन सक्दिन किन?
तपाईंले पहिले आफ्नो खाता सक्रिय गर्न आवश्यक छ। तपाईंको खाता सक्रिय गर्नको लागी कुनै ईमेल छैन भने तपाईंको ईमेल बाकस जाँच गर्नुहोस्, कृपया तपाईंको स्प्याम फोल्डर जाँच गर्नुहोस्।
म कसरी मेरो प्रोफाईल फोटो परिवर्तन गर्दछु?
तपाईंको प्रोफाइल पृष्ठमा, तपाईंको प्रदर्शित नाम अन्तर्गत "प्रोफाइल सम्पादन गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को पृष्ठमा "प्रोफाइल चित्र" क्लिक गर्नुहोस् (पृष्ठको बायाँ भागमा शब्दहरू खाली क्षेत्रमा क्लिक गर्नुहोस्), अब तपाई आफ्नै फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
मैले कसैलाई सन्देश प्राप्त गरेँ तर म यसलाई फेरि फेला पार्न सक्दिनँ, मैले अघिल्लो प्राप्त सन्देशहरू कहाँ पाउन सक्छु?
तपाईंको प्रोफाईल पृष्ठको मध्य भागमा, "FAV ADS" र "प्याकेज" बीचको "MESSAGES" बटन क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि "प्राप्त प्रस्तावहरू" मा क्लिक गर्नुहोस्, विज्ञापन शीर्षक चयन गर्नुहोस्, तपाईंले यस विज्ञापनको लागि अघिल्ला सन्देशहरू देख्नुहुनेछ।
किन म एक मुक्त विज्ञापन पोस्ट गर्न सक्दिन?
सबै दर्ता सदस्यहरूले निःशुल्क विज्ञापनको लागि एक पोस्ट गर्न सक्छन्। तर प्रणाली स्वचालित रूपमा तपाईंको ड्राफ्ट विज्ञापन सुरक्षित गर्न सक्छ, त्यसपछि तपाइँ नयाँ विज्ञापन पोस्ट गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंले आफ्नो अघिल्लो मस्यौदा विज्ञापन सम्पादन गर्न र प्रकाशित गर्नु पर्छ। प्रोफाईल पृष्ठमा, तपाईंको प्रोफाइल फोटो अन्तर्गत "MY ADS" क्लिक गर्नुहोस्, तपाईले तपाईको ड्राफ्ट विज्ञापन देख्नुहुनेछ। यसलाई सम्पादन गर्न र विज्ञापन पेश गर्न "विज्ञापन सम्पादन गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।
मेरो विज्ञापन कसरी सम्पादन गर्न सक्छु?
प्रोफाईल पृष्ठमा, तपाईंको प्रोफाइल फोटो अन्तर्गत "MY ADS" क्लिक गर्नुहोस्, तपाईले तपाईको ड्राफ्ट विज्ञापन देख्नुहुनेछ। यसलाई सम्पादन गर्न र विज्ञापन पेश गर्न "विज्ञापन सम्पादन गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।
वेबसाइट 100% नि: शुल्क छ?
यो खाता दर्ता गर्न निःशुल्क छ। प्रत्येक खाता विज्ञापन पोस्ट गर्न र विज्ञापन3पटक टकराउन निःशुल्क छ। विज्ञापन (अंग्रेजीमा) अन्य 35 भाषाहरूमा अनुवाद गर्न नि: शुल्क छ। यद्यपि, अधिक सुविधाहरू प्रदान गर्न, उन्नत प्रयोगकर्ताहरूको लागि भुक्तानी विकल्पहरू छन्।
के सदस्यता प्याकेजहरूको लागि भुक्तान गर्न सुरक्षित छ?
हो, भुक्तान गर्न सुरक्षित छ र तपाईं पेपाल को माध्यम ले तिर्नु भएको छ।
के मैले मेरो विज्ञापन अंग्रेजीको सट्टा अन्य भाषामा पोस्ट गर्न सक्छु?
हाल हामी अंग्रेजी मा लिखित विज्ञापन स्वीकार गर्दछौं।
एक प्रदर्शित विज्ञापन कब सम्म 'विशेष' रहनेछ?
एक विशेष विज्ञापन विज्ञापन 30 दिन को अवधि मा 'फीचर' रहनेछ। 30 दिन पछि, तपाइँ अझै पनि विज्ञापनका सबै विज्ञापन सूचीमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ, तर तपाइँले विशेष विज्ञापनहरूको सूचीमा फेला पार्न सक्नुहुन्न।
'विज्ञापन टकराउने' को मतलब छ?
यदि तपाइँ एक विज्ञापन टकराउनुहुन्छ भने, तपाईंको विज्ञापन सबै विज्ञापनहरूको सूचीमा देखाईनेछ।
मैले भुक्तानी गरेपछि, तपाईं कति लामो पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई भुक्तानी प्याकेज दिनुहुन्छ?
भुक्तानी स्वचालित रूपमा पुष्टि भएको छ, तुरुन्त भुक्तानी गरेपछि, तपाइँ आफ्नो भुक्तान प्याकेजको सुविधाहरू रमाउन सक्नुहुन्छ।
के तपाईं मलाई व्यापार साझेदार वा लगानीकर्ता फेला पार्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, हामी केहि सेवाहरूमा व्यापार सेवा प्रस्ताव गर्दछौं, कृपया अधिक जानकारीका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।